E-China Umkhiqizi Womshini Wekhadi Lekhadi Lesikweletu Lomshini Womshini Wekhadi Lesikweletu Lasebhange Umshini Wokufaka Embossing Umshini Shenjiang
Umshini Wokufaka Embosser Ohlakaniphile
I-Smart Embosser Machine (SEM) iyitheminali ehlakaniphile eyenzelwe ukusheshisa inqubo yokukhishwa kwekhadi. Lesi sixazululo singahlanganiswa nezinhlelo zokufaka isicelo sekhadi lasebhange ukuze kunikeze amakhasimende umuzwa oshelelayo lapho ekhipha amakhadi amasha. Ngenxa yokuthi lesi sixazululo singaphrinta futhi sigcizelele izinhlamvu, amabhange anganquma ukusebenzisa lo mshini kuzo zonke izinhlobo zamakhadi asebhange.
Amakhasimende angafaka isicelo samakhadi ku-inthanethi noma ngezinye izikhumulo zezicelo. Uma sekugunyaziwe, ukuqinisekiswa kungenziwa nge-SEM ukuze amakhasimende aphrinte amakhadi awo amasha ngokushesha.
Ukwenyuka kokusebenza kwekhasimende
Sezadlula izinsuku lapho amakhasimende kufanele alinde izinsuku ezimbalwa ukuze athole amakhadi awo amasha asebhange. Esikhundleni salokho, uhlelo lungenziwa lula kuwo wonke amagatsha amabhange kunciphisa isidingo sezinsiza zekhawunta, okwehlisa nezindleko zokusebenza.
Izinketho zokuphrinta zekhadi ezenziwe ngokwezifiso
Amabhange awasawadingi amasevisi ezinkampani zangaphandle ukuze aphrinte kusengaphambili amakhadi asebhange. I-SEM yethu evamile ingasekela imiklamo enezinhlangothi ezimbili, ukuphrinta, nokugqamisa kumakhadi asebhange amhlophe angenalutho.
Okuluhlaza okwesibhakabhaka noma okwenziwe ngokwezifiso
Ikhathoni noma Ngokhuni
Umuzwa ongcono kakhulu womsebenzisi
I-Chinese Mainland,iyuniyani yase-Europe,Emaphakathi Mpumalanga,IMpumalanga Yurophu,i-Latin America,Ivunzini,I-olwandle,IHong Kong neMacao neTaiwan,IJapan,I-Southeast Asia,IMelika,Abanye